Dhaabbata hojjetaa 900 qabuu garuu waajjira hin qabne - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Gartuun Keet barana Taayilaanditti wal argan
Waajjira qabaachuu dhiisuun dhaabota hedduu biratti guddachaa jiru, hojjetootaaf gariimoo hamaadha?
"Dandeettiin hundaaf qixa hirama carraan garuu yeroo mara akkas miti," jetti Keet Hiwustan. "Akkanatti hojjechuu jechuun dandettikee bira ga'us carraa akka argattus si gargaara."
Dhabbata guddaa biyyoota hedduu jiran 'Automattic' jedhamu keessaa gartuu tokko hogganti. Dhaabbata kanatti hojjattoota 930 iddoo garaa garaarra hojjetaniifi waajjira dhaabbata tokkollee hin qabnedha.
"Aadaa keenya keessatti, namni maqaa waajjiraa kaasu hin jiru," jechuun sagantaa BBC 5 "Wake Up To Money" jedhutti himteetti.
"Ani wajjirarraa bilisa. Bilisummaa keenya jaallanna, wal arguuf immoo iddoo addaa addaatti imalla, kanaaf yeroo gaariis ni qabaanna."
Namichi astiroonootii Afriikaa kan duraa ta'uuf ture du'e
Naayijeeriyaan 'zoonii daldala bilisaa addunyaa guddichatti' makamte
Qacaraan ishee daldala xiqqaa guddachaa jiru yoo tahu, wajjira qabachuu kan hin filanne keessaa tokko.
Taajaajilli inteerneetii saffisaa, ergaa barreeffamaafi viidiyoo guddachaa deemuufi meeshaaleen hoggansaafi waliin hojjechuuf barbaachisan baay'aachaa deemuunsaa dhaabbootni hedduun akka waajjira guutummaatti dhiisan taasisaa jira.
Kanaaf, namoota iddoo adda addaa hedduurraa qacaruun manatti ykn immoo iddoo waliin taa'uu danda'an irraa akka hojjetan gaafatu.
Hojjatoonni 'Automattic' biyyooti 70 adda addaarra hojjetu. Kanaafis dhabatni kun waajjiraaf kaffaltii baasurra, walga'ii hajjeettotaa waggaa keessatti taasifamuuf baasii imalaa kaffala.
Dabalataanis hojjeettootaaf meeshaa manatti hojjechuuf isaan barbaachisu ni guutaaf. Warra mana bunaa keessatti hojjechuuf yaadaniif baasiii isaanii danda'a. Garuu kun ammas baasii waajjirarraa gadi aanaadha.
Goodayyaa suuraa Isheefi waahilootni ishee wajjiratti hidhamuurra bilisa ta'uu akka jaallatan Keet ni dubbatti.
"Wajjira qabaachuu dhiisuun baasiin siritti ni xiqqeessa, keessumaayyuu magaalota akka Landan, Saan Firaansiskoofi Niw Yoork iddoo kiraan wajjiira hedduu guddaa ta'etti," jetti Keet.
"Garuu yeroo tokko tokko qaamaan wal arguun barbaachisaa waan ta'eef yeroo yerootti wal agarra. Hojjatooti wajjirichaa guutuun wagga waggaatti wal agarra, gartuuleen hedduun immoo si'a lamaa wal argu.
"Imala hojjattoota hundumaaf qarshii ni baasna. Gartuunkoo waggaa kana Taayilaanditti wal agarre.
'Amala guddachaa dhufe'
Waajjiraa alatti hojjachuun namoota ofiif hojjataniifi hojjatoota yeroo bilisaatti hojjatan biratti guddachaa jira.
Akka Dhaabbata Qorannoo Humna Hojii Biyyaaleessa UKtti, namootni miliyoona 1.54 ol hojii yeroo gutuu isaani manaa hojjetu - waggaa 10 dura 884,000 ture.
Yeroo amma dhaabotni (biznasootni) tokko tokko iddoo wajjiraa hojjettoota isaani olitti, yaada waajjira giddu galeessa qabachuuyyu dhiisatti jiru.
"Dhugumatti amala guddachaa dhufedha. Wanta baasii hir'isuufi namoota reefu jalqabaniif gaaridha," jedhu Yunivarsitii 'Exeter Business School'tti piroofesarri amala dhabbilee qoratan Ilke Inceoglu
"Karaa hojjetoota yeroo ilaallu, asiifi achi deemuun hin jiraatu kun immoo faayida guddaadha."
Goodayyaa suuraa Waggooti 10 keessatti lakkoobsi namoota manaa hojjetanii dabaleera.
Nama hojiif ganama ganamaan fiiguuf manaa hojechuun akka carraa guddatti ilaalamuu danda'a, garuu midhaa tokko tokkos ni qabaata.
Zooniin daldala bilisaa Jabuutii eebbifame
Prof Inceoglu: "Namootni tokko tokko daangaa jireenya manaafi hojii gidduu jiru adda baasuu ni dadhabu. Wajjira waan hin qabneef yeroo hunda manaa hojjetta yoo ta'e, eessatti hojii xumurtee jireenya manaa kan itti fuftu?
"Wantoota kana gidduu daangaan akka jiraatuuf yeroo fudhatanii yaaduun ni barbaachisa."
Manaa hojjachuun midhaa biraas ni qabaata. Dhaabatni fayya sammuu 'Mental health charity Mind' jedhamu namootni manaa hojjataan miira qofummaafi namarra addaan ba'uun caalatti midhamu jedha.
Haa ta'u malee, hojii waajjiraan alaaf rakkoon jiru hir'ifamuu danda'a jedhu Prof Inceoglu: " Namoota manaa hojjatanitti qofummaan ni dhaga'ama yaaddoon jedhu jira, garuu yoo hojjettoonni hundi haala tokko keessa jiraachuun isaani miira hariiroo ni uuma."
Goodayyaa suuraa Manaa hojechuun hariiro ni guddisaa jechuun namootni amanan jiru.
Jess Siims dhaabata isheen alatti hunduu wajjira galuun hojjetu keessa turte. Yeroo amma gutummaa guututti manarraa wajjira namoota akka ishee of keessa qabu 'The doers' jedhamu keessaa hojetti. Yeroo hundi gargar faca'ee jiru ni salphata jetti.
"Yeroo siin alatti namni hundi iddoo tokkotti wajjira keessa hojjettu, akka sochii wajjiraa itti hin affeeramne qofaa karaa foddaa ilaaluti," jetti.
"Yeroo hunda waajjira waan hin jirreef namootni odeeffannoo sii keennu ni dagatu. Kanaaf uumamuukee yaadachiisuuf nama ari'aa olta."
"Amma, namoota akkakoo manaa hojjatan waliinan hojjadha, kanaf hundi keenya haala tokko keessa jirra. Kanaaf hundi keenya haalaafi miira waahilootni keenya keessa jiran waan beeknuuf, walii yaadna."
Keet Hiwustan manaa hojjechuun hariiroo garii qabaachuuf gaariidha jettee amanti. "Hojiin manaa hojjettu rakkoo hojii ifaan akka haasoftu si taasisa kanaaf sirritti furmaata itti barbaadu nu dandeessisa."
"Yeroo waliin waajjira keessa hojjetu 'waliin yeroo hunda laqanaa nyaanna kanaaf gartuu cimaa wal deeggarudha' jettee yaaduuf salphaadha, kun garuu yeroo hundaa dhugaa miti."
"Akka gartuukoo ammaa yeroo gartuun kee adunyaa irratti faca'ee jiru, akka gartuutti wal ijaaruuf, haariroo gaarii qabachuufi wantoota sirriiti galmeessaa jiraachuu keenya bal'isnee yaadna,"